Tababare Arsene Wenger Oo Aan Dooneyn Iney Raacaan Wadadii Mourinho Ee Man United Si Ay U Yimaadaan Champions League Xilli Ciyaareedka Dambe. - Laacib.net
Tababare Arsene Wenger Oo Aan Dooneyn Iney Raacaan Wadadii Mourinho Ee Man United Si Ay U Yimaadaan Champions League Xilli Ciyaareedka Dambe.
Tababare Arsene Wenger ayaan wax fikrad ah ka heysan in ku guuleysiga Europa League ay tahay habka ugu wacan ee loogu soo bixi karo Champions League, wuxuuna ka doorbidayaa inuu diirada saaro sidii uu afarta sare ugu dhameysan lahaa Premier League.
Gunners waxey weysay afarta sare xilli ciyaareedkii hore taasoo waajib ka dhitay iney ciyaaraan Europa League, balse ma aaminsana macalinka reer France in habkii Jose Mourinho ee United ay tahay habka ugu fiican ee lagu yimaado Champions League.
Manchester United ayaa ka qeyb galeysa Champions League iyadoo ku dhameysatay booska 6-aad ee Premier League sababtoo ah waxey hanteen Europa League.
“Ma aanan xisaabin in habkaas aan ugu soo baxno Champions League” ayuu yiri Arsene Wenger mar uu ku guda jiray shirkiisa jaraa’id ee ka hor kulanka Cologne.
“Maahan fursadda ugu fiican, balse waa hal fursad. waxaan soo baxay dhawr jeer anigoo leh habka ugu fiican waa inaad ku dhameysataa afarta sare ee Premier League” ayuu yiri mar kale.
Dhanka kale Arsene Wenger ayaa doonaya inuu sameeyo isku shaandheyn isagoo niyadda ku haya kulanka Chelsea ee Axadda dhici doona.
“Chelsea waa fursad fiican oo aan kusoo bandhigi karno inaan sidaas sameyn karno” ayuu yiri Wenger isago ka hadlayay sida uu u miisaami karo kooxdiisa.
“Sadex maalmood, waad kusoo kaban kartaa”
Ugu dambeyntii Arsene Wenger wuxuu nasin doonaa kulanka Cologne ee habeen dambe dhawr ciyaartoy oo ay ka mid yahiin: Petr Cech, Laurent Koscielny, Alexandre Lacazette, Danny Welbeck, Granit Xhaka, Mesut Ozil iyo Aaron Ramsey.